“ Dacwad Ka Dhan Ah Xukuumadda Ayaan U Gudbinay Maxkamadda Sare..” Xisbiga Himilo Qaran - Ilays News
[ June 1, 2020 ] ” Guddida Covid 19 Ee Somaliland Ha Iscasilaan …” Xisbiga Waddani + [ Muuqaal ]	Featured
[ May 31, 2020 ] ” Xuuto Isagaan Shaqadiisa Garanayn ..” Xussen Dayr + [ Muuqaal ]	Featured
“ Dacwad Ka Dhan Ah Xukuumadda Ayaan U Gudbinay Maxkamadda Sare..” Xisbiga Himilo Qaran
Xisbiga Himilo Qaran ee uu hoggaamiyo Madaxweynihii hore Shariif Sheekh Axmed ayaa maanta sheegay inay dacwad ka dhan ah Xukuumadda u gudbiyeen Maxkamadda sare ee dalka.
Shir jaraa’id oo uu goor dhow xarunta Xisbiga ku qabtay Xoghayaha Warfaafinta Xisbiga Himilo Qaran Senator Ilyaas Cali Xasan ayaa sheegay in gal dacwadeed ka dhan ah Xukuumadda ay u gudbiyeen Maxkamadda sare oo ku saabsan tallaabadii dhowaan lagu xayiray Sheekh Shariif, xilli uu ku sii jeeday Kismaayo.
Waxaa uu sheegay in tallaabadii lagu xayiray Sheekh Shariif ay aheyd mid sharci darro ah, sidaas darteed Maxkamadda sare ka gudbiyeen dacwad ka dhan ah Xukuumadda.
Tallaabadii todobaad ka hor lagu xayiray Madaxweynihii hore Sheekh Shariif ayaa ka dhalatay xaalad siyaasadeed oo keentay in Xisbiyada siyaasadda ay ku dhawaaqaan isbaheysi.
Sheekh Shariif ayaa doonayay inuu ka qeybgala caleemka saarka madaxweynaha Jubbaland oo mar kale ku guuleystay doorasho lagu muransan yahay.
Dowladda Federaalka ee Soomaaliya ayaa horay u soo saartay amar ah in dhamaan duulimaadyada tagaya Magaalada Kismayo ay 24 saac kahor duulimaadka fasax soo weydiistaan hey’adda duulista rayidka ee fadhigeedu yahay Muqdis.
Tallaabada lagu joojiyay Sheekh Shariif ayaa la aaminsan yahay inay qeyb ka tahay cadaadiska dowladda ay ku saareyso maamulka Jubaland oo ay sheegtay in aysan aqoonsaneyn dhamaan doorashooyinkii ka dhacay Magaalada Kismayo.